မုသားဝါဒီ Khin Mg Ye Sein အား ထပ်မံချေမှုန်းခြင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မုသားဝါဒီ Khin Mg Ye Sein အား ထပ်မံချေမှုန်းခြင်း
မုသားဝါဒီ Khin Mg Ye Sein အား ထပ်မံချေမှုန်းခြင်းKhing Mg Ye Sein (https://www.facebook.com/seinkhinmg.ye)က မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ ဒီလို ရေး လာပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေထိုင်ရေး….သိတ်ကောင်းတယ့် ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ကုရ် အာန် ကျမ်းဟာ မွတ်စလင်အားလုံး လိုက်နာကျင့်သုံးသော ဘုရားစာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုရ်အာန် ကျမ်းစာ Sura 3, Verse 28 အရ မွတ်စလင်မဟုတ်သူနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ ချင်း မပြုရ၊ ပြုသူကို အလ္လာဟ် ကိုယ်တိုင် လည်လှီးမယ်။
The Koran is the Holy book of Muslim people. In Sura 3, Verse 28,aMuslim shall not befriendanon-Muslim. it says that Allah says that if they will befriendanon-Muslim, Allah will cut them off from himself.
အဲဒီ မှတ်ချက်ကို ကျနော် ပြန်လည် တုန့်ပြန်ရေးသားခဲ့တာကို စာရှုသူများအားလုံး လေ့လာလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Khin Mg Ye Sein ခင်ဗျား ကြားဖူးမလားတော့ မသိဘူး။ ယိုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား အခု ရေးထားတဲ့ ကွန့်မန့်ထ်မှာကို ဘာသာပြန်အမှားကြီးပါနေတယ်။ ကျုပ် အခု အချိန်မ ရသေး ဘူး။ ပြန်လာခဲ့မယ်။ အရှက်နဲ့ လူလုပ်တတ်အောင် ခင်ဗျား ကြိုးစားပါ။ အရှက်ဆိုတာ လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ကို ခွဲခြားပေးတဲ့ အရည်အသွေးတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ ခင်ဗျားသိ ထားစေ ချင်ပါတယ်။ အခု ပြောချင်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ကွန့်မန့်ထ် ဖျက်ပစ်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့နော်။ ယူ ထားပြီးပြီ။
Khin Mg Ye Sein ကျုပ်လာပြီ။ ခင်ဗျားရဲ့ မဟုတ်မမှန် လိမ်လည် လုပ်ကြံထားတဲ့ မုသား ကို ချေမှုန်း ဖို့အတွက်ပါ။ ကဲ-ပထမဦးဆုံး ခင်ဗျား ကိုးကားထားတဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ ကျမ်းမြတ် ကုရ် အာန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်က မှားနေတဲ့ အကြောင်းကနေစမယ်။ ခင်ဗျားက ကျုပ်တို့ရဲ့ ကျမ်းမြတ် ကုရ် အာန်ရဲ့ မူရင်း အာရဗီဘာသာစကားကို မူးလို့တောင် ရှုဖူးတဲ့ ပုံမပေါ်သူမို့ ခင်ဗျား မတောက် တခေါက် တတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်တွေပဲ အရင် ဖော်ပြပေးမယ်။ ခင်ဗျား ကိုးကား ထားတဲ့ နှုတ်ခပါဌ်တော် (၃း၂၈) ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် အချို့ အရင်ဆုံး ဒီနေရာမှ ကျုပ်ပြပေး မယ်။
ကဲ ဘယ်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကိုယ်တိုင်လည်လှီးမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်။ မူရင်းမှာလည်း မပါဘူး။ ဘာသာပြန်မှာလည်း မပါဘူး။ ခင်ဗျား ဘယ်ကမှန်းမသိ ကူးယူထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်က လုံးဝ မှားနေတယ်။ အဲဒါက အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားလိုပဲ လူလိမ်တစ်ဦးဦးက လိမ်လည်ပြီး ဘာ သာပြန် ထားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကဲ-အဲဒီ နှုတ်က္ခပါဌ်တော်ရဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်ကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါတရား ထားရှိကြကုန် သောမုအ်မင်န်တို့သည် မုအ်မင်န်များကို ပစ်ပယ်ကျော်လွန်၍ (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား) သွေဖည်ငြင်းပယ်ကြကုန်သော ကာဖိရ်တို့ကို အဆွေခင်ပွန်းများအဖြစ် မပြု အပ် ကြပေ။ အကြင် မည်သူမဆို ယင်းသို့ပြုအံ့၊ ထိုသူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဘယ် တစုံတခုနှင့်မျှ မပတ်သက်တော့ချေ။ သို့ရာတွင် အသင်တို့သည် ထို(ကာဖိရ်)တို့၏ ဘေးရန်မှ စိုး ရိမ်ကြောင့်ကြ(၍မိမိတို့ကိုယ်ကို ကာကွယ်လိုကြသောအခါ၌မူ အခြေအနေအရ ပြု လုပ်နိုင်ကြ) ပေ သည်။ အမှန်သော်ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိအားကြောက်ရွံ့ရန် အသင်တို့ကို ခြိမ်းခြောက်တော် မူသည်။ ထို့ပြင် နောက်ဆုံးပြန်လည်ရန် ဌာနသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အထံတော်၌ သာလျှင် ဖြစ်ပေသတည်း။
ကဲ-ဒီနှုတ်က္ခပါဌ်တော်မှာပါတဲ့ ကာဖိရ်ဆိုတဲ့ အာရဗီစကားလုံးကို ခင်ဗျား နားလည်အောင် အရင် ရှင်းပြမယ်။ ကာဖိရ်ဆိုတာ ဘာသာခြားတိုင်းကို ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကာဖိရ်ဆိုတာ က ရှေးယခင် နဗီရစူလ်လို့ခေါ်တဲ့ တမန်တော်တွေရဲ့ လက်ထက်တောမှာဆိုရင် တမန်တော်တွေ ကနေပြီးတော့ လူသားတွေကို တစ်ဆူတည်းသော ကိုးကွယ်ရာအရှင်ကိုသာလျှင် ခ၀ပ်ကိုးကွယ်ဖို့၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းစတဲ့ ချို့တဲ့မှုအပေါင်းကနေ ကင်းစင်လွတ်မြတ်တဲ့ အနန္တ ကရုဏာတော် ရှင်ကိုသာလျှင် ယုံကြည်ကိုးစား အားထားကြဖို့ စတဲ့ အစ္စလာမ့် တရားဒေဿနာတော်တွေကို ဉာဏ်ပညာ သုံးပြီး၊ အထောက်အထားနဲ့တကွ ချပြပြီး ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ အဲဒီလို ဖိတ်ခေါ် မှုကို လူသားက မောက်မာပလွှားပြီး၊ လက်မခံဘူး၊ သွေဖည် ငြင်းဆန် ပုန်ကန် သောင်း ကျန်းမယ်။ အဲဒီသူကို ကာဖိရ်လို့ ခေါ်တယ်။ အဲ- တမန်တော်တွေရဲ့ အန္တိမ နောက်ဆုံးပိတ် နဗီ၊ ရစူလ် တမန်တော်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်တို့ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်သခင် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်းဟိ ၀စလ္လာမ်)ရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်တော်ရဲ့ နောက်လိုက်တွေထဲ အစ္စလာမ်ရဲ့ နက်နဲသိမ်မွေ့တဲ့ ပညာရပ်တွေကို တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ပညာရှိ၊ ပညာတတ်တွေက ဉာဏ်ပညာသုံးပြီး၊ အထောက်အထားနဲ့တကွ လူထုရှေ့မှောက် ချပြပြီး ဖိတ်ခေါ်တယ်။ အဲဒီလို ဖိတ်ခေါ်မှု ကို ငြင်ဆန်းမယ်၊ သွေဖည်ပုန်ကန်မယ်၊ တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကို ကာဖိရ်လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီတော့ ကာဖိရ်ဆိုတာ ဘာသာခြားတိုင်းကို ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အစ္စလာမ်ရဲ့ လှပတဲ့ သတင်းစကားကို ကြား ရပါ လျှက်နဲ့ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး သွေးနထင်ရောက်ကာ၊ လူမျိုးအုပ်စုကြီးလို့၊ စစ်တပ်ရှိလို့၊ အာဏာရှိလို့၊ ပညာတတ်လို့၊ အသားဖြူလို့ စတဲ့ မဟုတ်မဟတ်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို အခြေပြုပြီး၊ ဘ၀င်လေ ဟပ်ကာ သွေးနထင်ရောက်လျှက် သွေးဖည်ငြင်းဆန် ပုန်ကန် သောင်းကျန်းတဲ့ သူတွေ ကို ခေါ်တယ်။
သာခြားတိုင်းကို ကာဖိရ်လို့ခေါ်တာ မဟုတ်ပါ။ မုစ်လင်မ် မဟုတ်တဲ့သူတွေကို မုရ်ှရီးက်ဆိုတဲ့ အာရဗီ စကားလုံးသုံးပြီး ခေါ်တာ ရှိတယ်။ အဲဒီစကားလုံးကတော့ ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲ ကိုးကွယ်သူတွေလို့ အဓိပ္ပါယ် ရတယ်။ တစ်ဆူတည်း၊ တစ်ပါးတည်းသော ကိုးကွယ်ရာအရှင်ကို လက်ခံတယ်။ ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားအရာ (၀ါ) ကိုးကွယ်ရာတွေကိုလည်း တစ်ဆူတည်းသော အနှိုင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ရာအရှင်ကို ကိုးကွယ်သလို တန်းတူ ထားပြီး ကိုးကွယ်တယ်။ ဆည်းကပ်တယ်။ အားထားတယ်။ ယုံပုံအပ်နှံတယ်။ သူတို့ရဲ့ထံမှာ ဆုတောင်းမှုပြုတယ်။ တစ်ချို့သူတွေကတော့ တစ်ဆူတည်းသော ကိုးကွယ်ရာအရှင်ကို ရှိလို့ ရှိမှန်း မသိကြတဲ့အတွက်၊ တနည်းအားဖြင့် တစ်ဆူတည်းသော ကိုးကွယ်ရာအရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းစကားတွေ၊ အသိပညာတွေ သူတို့ရဲ့ထံကို မရောက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ မိဘဘိုးဘွား ဘီဘင်တွေ ခ၀ပ်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ကိုးကွယ်ရာတွေကိုပဲ မိရိုးဖလာမပျက် ဆက်လက် ကိုးကွယ် နေခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလို လူတွေကို မုရ်ှရီးက်လို့ အာရဗီဘာသာစကားနဲ့ စာပေမှာ သုံးနှုန်းတယ်။ အစ္စ လာမ်ရဲ့ ဝေါဟာရအရ သုံးနှုန်းတယ်။
ခင်ဗျားကိုးကားထားတဲ့ နှုတ်က္ခပါဌ်တော်ရဲ့ မူရင်းမှာ သုံးနှုန်းထားတဲ့ အာရဗီ စကားလုံးက ကာဖိရ် ဖြစ်တယ်။ စောစောက ကျုပ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ။ ကာဖိရ်ဆိုတာ သွေဖည်ငြင်းဆန် ပုန်ကန်သောင်း ကျန်း သူကိုခေါ်တဲ့အကြောင်း။ အဲဒီတော့ ကောင်းပြီ။ ခင်ဗျား နားလည်လွယ်အောင် နိုင်ငံရေးနဲ့ ယှဉ်ပြ မယ်။ တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာ။ တော်လှန်ရေးသမားကို စစ်အစိုးရက သောင်းကျန်းသူ၊ သူပုန်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ဒီလိုပဲ တော်လှန်ရေး သမားတွေကလဲ စစ်အစိုးရကို သူပုန်၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်တဲ့သူ၊ သားသတ်သမား တွေလို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ အဲဒီတော့ တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ ရဲဘော်တစ်ဦးက သွားပြီးတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ စစ်တပ်က စစ်သားတစ်ဦးနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရင် တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေက သူ့ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ။ ဟာ- ဒီကောင် အရမ်းကို Diplomacy ကောင်းတဲ့ကောင်းပဲ၊ Social ကောင်းတဲ့ ကောင်ပဲလို့ သတ်မှတ်မလား။ ဒါမှမဟုတ် သစ္စာဖောက်လို့ သတ်မှတ်မလား။ ဒီလိုပဲ စစ်အစိုးရဘက်ကလဲ ဘယ်လို သဘောထား မလဲ။ တော်လှန်ရေးသမားနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ စစ်အစိုးရတပ်က ရဲဘော်ကို။ သူရတို့၊ သီဟတို့ ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေ ဆပ်ကပ်ပြီး ဂုဏ်ပြုမှာလား။ သစ္စာဖောက်လို့ သတ်မှတ်ပြီး အပြတ်ရှင်းမှာလား။ ခင်ဗျား အဲဒါကို အရင် စဉ်းစားပါ။
အခု ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ မုစ်လင်မ် မဟုတ်တဲ့သူ အများစုကြီးက မုရ်ှရီးက်စာရင်းထဲမှာ အကျုံးဝင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အစ္စလာမ်ရဲ့ လှပတဲ့ သတင်းစကားကို တစ်ခါဖူးကမျှ မကြားဖူးဘူး။ အစ္စလာမ်ကို ကုလားဘာသာ၊ မုစ်လင်မ်ဆိုရင် ကုလား ဒီလောက်ပဲ သိရှိထားကြတာ။ သူတို့ဟာ အကယ်၍ အစ္စလာမ်ရဲ့ လှပပြီး သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ တရားတော်တွေကို သူတို့ရဲ့ မိခင်ဘာသာ စကားဖြစ်တဲ့ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ ကြားနာရမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ မုစ်လင်မ်တွေ အင်ရှာ အလ္လာဟ် ဖြစ်လာမှာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယုတ္တဗေဒရဲ့ အဆိုတစ်ခုရှိတယ်။ လူသားဟာ အမှန် တရားနဲ့ တရားမျှတမှုကို ၎င်းရဲ့ မူလသဘာဝမှာ ချစ်မြတ်နိုးတယ်တဲ့။
အဲဒီတော့ ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် ကာဖိရ်လို့ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ်ရဲ့ တရားဒေသနာတော်တွေကို ကြားနာရပြီး၊ သွေဖည်ငြင်းဆန် ပုန်ကန် သောင်းကျန်းတဲ့သူတွေကို အဆွေခင်ပွန်း မလုပ်ကြနဲ့ လို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ အူလိုက် အသည်းလှိုက် မပေါင်းကြနဲ့လို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကာဖိရ် ဆိုတာ ဘာသာခြားတိုင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ လူမျိုးခြားတိုင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ မုစ်လင်မ် မဟုတ်သူတိုင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
အဲဒီအတွက် ကျုပ်တို့ရဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြန်လှန်ရရင် ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေဟာ ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးကွဲပြားတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ လက်တွဲပြီး နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ နယ်ချဲ့ တော်လှန်ရေး၊ ဂျပန်ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။
စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်အဆက်ဆက်မှာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တိုက်ခိုက် တော်လှန်ဖို့အတွက် ပါဝင်ခဲ့တယ်။ တောခိုခဲ့တယ်။ တော်လှန်ရေး တပ်သားတွေအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ ဘာသာ မတူ လူမျိုးကွဲပြားတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ လက်ရေတစ်ပြင်တည်း ဥမကွဲ သိုက်မပျက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ နေထိုင်ပြီး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖျက်ရန်စွယ် အနန္တရာယ်တွေ ကို ချေမှုန်းသုတ် သင်ခဲ့ တယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေရဲ့ သွေးတွေက သက်သေခံနေပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်ရဲ့ သွေးက သက်သေခံနေပါတယ်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ဖို့ ဂျပန်ရဲ့ လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မှုကို အံ့တုပြီး သေမင်းကို စိန်ခေါ်ရဲတဲ့ အာဇာနည်တွေရဲ့ သွေးတွေက သက်သေခံနေပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကျုပ်တို့ ဗမာမွတ်စလင်မ် သူရဲကောင်း ဗိုလ်မှူးဘသော်လို ပုဂ်ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ သွေးတွေက သက်သေခံနေပါတယ်။
ဒါဟာ ကျုပ်တို့ရဲ့အမိမြန်မာပြည်က မုစ်လင်မ်တွေဟာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ သွန်သင်ချက် အစစ်အမှန်ကို နားလည်ပြီး လိုက်နာ ကျင့်သုံးခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့လို အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေး သမားတွေ၊ မုစ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေ၊ ဘာသာမတူ လူမျိုးကွဲပြားတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြားမှာ အမုန်းတရားတွေ တလှိမ့်လှိမ့်နဲ့ တိုးပွားလာအောင်၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိက ရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာအောင် မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံထားတဲ့သတင်းတွေ၊ ပုံတွေ၊ စာတွေ ဖြန့်ဖြူးတတ်ကြတဲ့သူတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက ရှိခဲ့ပြီးသားပါ။ အခုမှ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မုစ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေပဲ ဆိုးဝါးတဲ့ နိဂုံးနဲ့ ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပုံပြင် မဟုတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းနဲ့ အစ္စလာမ့်သမိုင်းက သက်သေခံနေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သူတို့ အလုပ်ရဲ့ အလုပ်ရဲ့ အကျိုးပေးပေါ့ဗျာ။
ဒါကြောင့် ခင်ဗျားလည်း ခင်ဗျားအလုပ်ရဲ့ အလုပ်အကျိုးကို မကြာခင်မှာ ပြန်ခံစားရမှာပါ။ အမုန်းတရားတွေကို ဖြန့်ချိတတ်တဲ့သူဟာလူတကာရဲ့မုန်းခြင်းကို ပြန်ခံရတတ်ပါတယ်။ မေတ္တာတရားကို
ဖြန့်ချိတတ်တဲ့သူဟာ လူတကာရဲ့ မေတ္တာထားခြင်းကို ပြန်ခံရပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့် ခင်ဗျားအနေနဲ့ မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်လုပ်ကြံပြီး ၀ါဒမှိုင်းတွေ တိုက်နေတဲ့၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိက ရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ရပ်တန်းက ရပ်လိုက်ခြင်းဟာ ခင်ဗျားအတွက် အကောင်း ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ခင်ဗျားအနေနဲ့ မရပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း၊ အရှက် မရှိဆိုရင်လည်း ဆက်ပြီးတော့ လိမ်မြဲလိမ်ဆဲ လုပ်ပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားရဲ့ မိဘတွေအတွက်တော့ ကျုပ် စိတ်မကောင်း ပါဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားလို အရှက်မရှိတဲ့၊ မိဘမျက်နှာ အိုးမဲသုတ်တဲ့ သားဆိုးသားမိုက်လေးကို ဒုက္ခသုက္ခမျိုး စုံခံပြီး မွေးခဲ့ကျွေးခဲ့ရတာ။ အော် – ထားပါတော့လေ။ အရှက်မရှိသူတို့ ဆက်၍ မရှိနိုင် သလို၊ ပြာပုံတိုးသူတို့ ဆက်၍ တိုးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါဟာလည်း လူသားတိုင်းရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးမို့ပါပဲ။ ကျုပ်ကလည်း ခင်ဗျားလို လူလိမ်လူညာ မုသားဝါဒီတွေကို ချေမှုန်းသွားမှာပါ။ ဒါဟာလည်း လူသားတွေရဲ့ အကြား ပေါက်ပွားလာမဲ့ အမုန်း တရားတွေကို ဖယ်ရှားသုတ်သင်ဖို့ပါ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတယ်။ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်သုံးပါးစလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။ အာမီးန်။
This entry was posted on January 9, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က အသုံးပြုခဲ့သော ရှေးခေတ် ရခိုင်လှေကြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် တူးဖေါ်
ဒေါ်စုစကား စဉ်းစားရာပါ ၊ ယုံကြည်မှုတော လုံ့ဝမရှိဘူး … →